Ebe a na -edebe ụlọ oriri na ọtaụ --ụ - IntoKildare
Ebe a na-eri nri Kildare bụ nke kacha mma na mba ahụ, site na nri nkasi obi obi ruo nri mara mma nke Michelin nwere, enwere ụlọ nri maka okpo ọnụ ọ bụla.
Otu ihe doro anya, agụụ agaghị agụ gị mgbe ị na-eme njem na County Kildare niile. N'ebe a, ndị isi nri na-elegara ala na oke osimiri anya maka mkpali n'ịmepụta menus ha. Anụmanụ nke a na-esi n'oké osimiri dọpụta ozugbo, ihe kacha ọhụrụ sitere n'aka ndị na-akụ ubi, na menus na-atụgharị gburugburu ihe dị n'oge bụ isi ihe na ebe iri nri Kildare. Maka nhọrọ dị mfe, e nwere cafes na-enye kọfị, achịcha, sandwiches na ice-cream. Ma ọ bụ maka ndị na-agba ọsọ, ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ahịa nwere ike imeju agụụ gị ozugbo. N'ime mpaghara ahụ niile, ndị isi nri nwere nkà na-eche ka ha gosipụta ihe okike ha mara mma nke ga-eme ka ị laghachi azụ maka sekọnd. N'agbanyeghị ihe ị na-achọ, a ga-ahapụ gị ka ọ bụrụ ihe efu maka ebe ị ga-eri nri na Kildare.
Thai Asian Indian Chinese spanish Italian Onye anaghị eri anụ / onye anaghị eri anụ American Irish / onye Europe Modern ọmarịcha nri French
Ụlọ ahịa Gastro-Pub Nri oriri Nri oriri n’èzí Egwu dị egwu N'ehihie Tea Ezi nri
24 nsonaazụ (s)
Ebe a na-akpọ Dew Drop Inn & Brewhouse
Awarding wining gastropub nke ji nlezianya na-ewepụta ihe ọ na-emepụta ma na-emepụta nhọrọ nke gins na biya biya. Ezigbo nri iri nri na uru maka ego.
Dị na obi nke Naas Co. Kildare na-emeghe 7 ụbọchị n'izu na-eje ozi dị ukwuu nri, cocktails, mmemme na ndụ egwu.
Abụọ-Michelin star ụlọ oriri na ọ restaurantụ celebraụ na-eme ememe mpaghara mepụtara, edu Chef Jordan Bailey, onye bụbu onye isi siri nri na 3-kpakpando Maaemo na Oslo.
Ogwe nri na ụlọ nri
Ogwe oriri na ọ restaurantụ restaurantụ mara mma nke 1920s chọọ mma na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-enye ọtụtụ ahụmịhe nri.
Bailey's Ogwe & Bistro
Ndị isi nri na -enye nri mmiri ọnụ, ndị otu hụrụ ha n'anya na -arụ ọrụ nke ọma na izu ike.
Achịcha & biya
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ dabere na Irish Pub omenala afọ 200, Moone High Cross Inn maka nri na ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ ma na-akpọ òkù.
Urtlọ na urtlọ Burtown
Burtown House na Co. Kildare bụ ụlọ Georgian mbụ dị nso na Athy, nke nwere ogige 10 acre mara mma maka ọha na eze.
Outdoorsụlọ oriri na ọṅụṅụ
Tlọ oriri na ọ Mụ Butụ Butt Mullins
Butt Mullins bụ azụmaahịa ezinụlọ na-agba ọsọ maka ọrụ ndị ahịa na-ekpo ọkụ na nlebara anya na nkọwa ihe karịrị afọ 30.
Isi nri nke Caragh
Cookes of Caragh bụ ụlọ ezinaụlọ siri ike nke Gastro pub, etinyela aka na ụlọ ọrụ ile ọbịa kemgbe afọ 50 gara aga.
Otu nnukwu menu jupụtara Thai efere na European oge ochie na ndụ trad music ọtụtụ abalị n'izu.
Pubs & Ndụ abalịIme ụlọ naanị
Edward Harrigan & onsmụ
Inye ihe kachasị mma nke mkpụrụ osisi mepụtara ighikota na nri Irish nke oge a na ụfọdụ nri mba ụwa.
Fallon's nke Kilcullen
Michelin tụrụ aro ahụmịhe nri nke na -enye nri na -atọ ụtọ na ikuku ntụsara ahụ.
Hartes nke Kildare
Onyinye mmeri nke gastropub na-enye nri Irish, ndị na-eme ihe ọ cookedụersụ na steak esiri na nkume dị ọkụ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hermione na Clubhouse
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hermione bụ ntọala dị mfe na ọkaibe nke bụ ọmarịcha ọnọdụ iji soro ndị enyi na ezinụlọ kerịta oge pụrụ iche. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ a ma ama maka nri nri ehihie Sunday ha […]
Onyeikpe Roy Beans
Nri America & Tex-Mex dị ebube, nnukwu uru na ọrụ enyi yana mmanya na biya na-eso ya na egwu na-atọ ụtọ.
Ụlọ akwụkwọ nri Kalbarri
Ahụmịhe esi nri pụrụ iche maka afọ na ikike niile n'ụlọ akwụkwọ nri Kilcullen nke ezinụlọ a na-enwe.
Ụlọ kichin Kathleen
Ebe kichin Kathleen dị na Ụlọ Carton dị na kichin ohu ochie. Ntọala ahụ na-ejigide ọtụtụ atụmatụ izizi gụnyere nnukwu stovu ígwè nkedo nke 1700s. Nke a bụ […]
Lemongrass Fusion Naas na-enye mmakọ magburu onwe ya nke ezigbo nri Pan-Asia.
Mkpọchi 13 Brewpub
N'ịbụ nke dị n'akụkụ nnukwu ọwa mmiri dị na Sallins, Lock13 na-emepụta biya nke aka ya mara mma dabara na nri dị mma sitere na mpaghara sitere na ndị na-ebubata ya.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 1180
Ahụmịhe iri nri pụrụ iche, ụlọ oriri na ọṅụṅụ 1180 bụ ọmarịcha ahụmahụ iri nri nke etinyere n'ime ụlọ iri nri nkeonwe na Castle 12th Century nke Kilkea Castle. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ a mara mma na-eleghara […]
Ebe kacha njem. Nwere ike iri nri, INKINKụ, DAN, SLEEP na saịtị nke ghọrọ ụkpụrụ maka ụlọ mmanya a mara mma.
Mkpụrụ obi Burger
Ogwe burger enyi na enyi vegan nke ndịda America dabere na etiti obodo Kildare ma na-enye ezigbo nhọrọ maka ma vegans na ndị na-eri anụ […]
Dị na Leixlip, Steakhouse 1756 na-eje ozi sitere na mpaghara, nri oge yana ntụgharị. Ọ bụ ebe kacha mma iji soro ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ rie nri ma ọ bụ ikekwe ọbụna ụbọchị […]
Ogwe Gastro dị n'akụkụ mmiri nke Grand Canal na-enye nri ọdịnala nwere ntụgharị ọgbara ọhụrụ.
Pubs & Ndụ abalịBed & Breakfast
1 2 Osote